မြန်မာ့ Game Development Industry နဲ့ အနာဂတ်လူငယ် – Live the Dream
Game တစ်ခုဖြစ်လာအောင် နောက်ကွယ်က ဘယ်အရာတွေ တွန်းပို့ပေးနေတာလဲ?? ဒီအကြောင်းအရာကို Game ဆော့တဲ့ လူငယ်တိုင်းက စဉ်းစားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဂိမ်းဆော့တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါတွေကို နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်သိသွားအောင်လေ့လာကြည့်ရအောင်လား??
အရင်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ Game Development လောကအကြောင်းကို ပြောကြရအောင်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း တစ်ခြားသော နိုင်ငံမှာတော့ ငွေကြေးအရင်းအနှီး၊ ပညာရှင် ပြည့်စုံတာကြောင့် Game Industry က ပိုမိုမြင့်မားလာသလို PUBG, Mobile Legend ဂိမ်းတွေဆို တစ်ကမ္ဘာလုံးရေပန်းစားလောက်အောင်အောင်မြင်လှပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Game Development ပိုင်းမှာ ပညာရှင်တွေရှိသော်ငြားလည်း ေငြေကြးရင်းနှီးမှုတွေ နည်းပါးတာ၊ နည်းပညာအားနည်းတာ၊ ပညာရှင်တွေ လုံလောက်မှုမရှိသေးတာကြောင့် ငတက်ပြားဆိုတဲ့ မြန်မာဂိမ်းလောက်ပဲ မင်မင်သိပါတယ်။ (ဒါကမင်မင်ရဲ့ အားနည်းချက်လည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့)။ ဒါပေမဲ့ Game Development Industry မှာရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ဝါသနာရှင်လူငယ်တွေကို ဆွဲခေါ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်သလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Game Development လောကကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကတော့ ပြင်းပြနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Live The Dream Media အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ Game Development အကြောင်းနဲ့ Game Industry လောကထဲဝင်နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းတွေကို ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Game Development ဆိုတာဘာလဲ??
Game Development ဆိုတာကတော့ ဂိမ်းတွေကို ဖန်တီးခြင်းလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ Game တစ်ခုကို လူတွေနှစ်သက်သဘောကျအောင် အမျိုးမျိုးစဉ်းစားလုပ်ဆောင်ရသလို၊ အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးပါ။ အိမ်တစ်အိမ်ဆောက်ရင် ဘယ်လို ခိုင်ခံအောင်ဆောက်ရမလဲ၊ ဘယ်လို လှပအောင်ဆောက်မလဲ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိအောင်ဘယ်လိုဆောက်မလဲ၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်၊ အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရအောင် စသဖြင့် စနစ်တကျတည်ဆောက်ရတဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များစွာလိုအပ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခု တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလည်း လူတွေ နှစ်သက်သဘောကျပြီး စိတ်အပန်းဖြေမှုပေးနိုင်တဲ့အထိလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ က တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲရပ်တည်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ ကလေးနားလည်လောက်တဲ့ Game ကအစ ရှုပ်ထွေးတဲ့အဆင့်တွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါတဲ့ Game တွေအအတွက် ပညာရှင်အများအပြားပေါင်းစည်းထားပြီး ငွေရေးကြေးရေး ကုန်ကျခံရပါတယ်။ ဒါမှလည်း တကယ်အောင်မြင်တဲ့ Game တစ်ခု ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ လူတွေ ကြိုက်နှစ်သက်တာနဲ့ အညီ ငွေကြေးမြောက်မြားစွာကိုလည်း ပြန်လည် ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Game Development ကဘာလဲလို့မေးရင် ပညာရှင်တွေများစွာ ပေါင်းစည်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
Game Development မှာ ဘာတွေ ပါမှာလဲ?
Game Development ပိုင်းမှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ Role များစွာရှိပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေမြင့်မားမှု နဲ့ သက်ဆိုင်ရာထူးချွန်ပညာရှင်လိုအပ်မှုတွေ က တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် Game Designer, Artists, Programmer, Level Designer, Sound Engineer, Tester စတဲ့ role အလိုက် ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲကမှ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့်အရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ Game Development Industry မှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။
Designing ဆိုတာက Game တစ်ခုရဲ့ ပထမဦးဆုံးလုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ Game ရဲ့စည်းကမ်းတွေ၊ ဂိမ်းကစားသူတွေနဲ့ ဂိမ်းရဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေ၊ ဂိမ်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေ၊ ဂိမ်းတစ်ခုမှာပါတဲ့မြေပုံတွေ၊ Game တစ်ခုရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကအစ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်မှာလဲ? ဘယ်လို Character တွေ သုံးမလဲ? ဘယ်လို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ ကစားရမှာလဲ? Game ရဲ့ Dialog, Game နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် နောက်ခံအသံ (Narration), ဂိမ်း App ရဲ့အပြင်အဆင်အထိ Game Designing ပိုင်းမှာပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခု ကို လူအများနှစ်သက်မှုက Game Designer တစ်ယောက်ရဲ့ Design နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တာဖြစ်လို့ Game Designer တွေအနေနဲ့ Game ကို ဘာကြောင့် လူတွေ ဆော့ကြတာလဲ? လူတွေ စိတ်ဝင်စားမှု ရရှိနိုင်မယ့် အကြောင်းတွေက ဘာလဲ? စသည်ဖြင့် လူတွေရဲ့ Psychology နဲ့ Philosophy ပိုင်းကို လည်း သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို ကျယ်ပြန့်တဲ့ Design ပိုင်းမှာ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့်အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ့်အနေနဲ့ designer တစ်ယောက်အဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Artist ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Game တစ်ခုရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေ ဖန်တီးတာ၊ Game မှာ ပါတဲ့ Environment တွေကို ဖန်တီးတာ၊ ပစ္စည်း တွေကို ဖန်တီးရေးဆွဲတာစသည်ဖြင့် role တွေ များစွာရှိပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်လား၊ environmentလား၊ Game ထဲမှာပါတဲ့ ပစ္စည်းအတိုအစလေးတွေဖန်တီးတာကို သဘောကျလား ကိုယ့်ရဲ့ အားသာရာအလိုက် Artist တစ်ယောက်အနေနဲ့ Game Industry မှာ အားဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ Artist တွေ အနေနဲ့ Game တွေအတွက် 2D, 3D ပုံတွေ ဖန်တီးခြင်းမှာ အသားပေးလုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်လို့ ပုံဆွဲပါရမီရှိတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ Game Artist ပိုင်းကို လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Game ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့က များစွာသော Computer code တွေကို ပေါင်းစည်းရေးရတာဖြစ်လို့ Programming ပိုင်းကလည်း Game တစ်ခုအတွက်အရေးပါလှပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်လှုပ်ရှားမှု၊ တုံ့ပြန်မှုတွေကို ရေးရတဲ့ program, AI နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး Game ရဲ့ Plan များအစီအစဉ်တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ရေးရတဲ့ program တွေက အစ data တွေကို manage ပိုင်း၊ သိမ်းဆည်းမှု ပိုင်းအတွက် Program စသည်ဖြင့် program များစွာရေးဖွဲ့ပြီးမှသာ game app တစ်ခုရယ်လို့ offline game ဖြစ်ဖြစ်၊ online game ဖြစ်ဖြစ် ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေးရတဲ့ Program အလိုက် Programming ပိုင်းမှာလည်း role ခွဲထားတာဖြစ်လို့ ကိုယ့်အားသာမှုပိုင်းမှာ program ဝင်ရေးရင်နဲ့ game industry ထဲမှာ လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Programming coding တွေအတွက် Computer Languages တော်တော်များများကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပြီး Application Development ပိုင်းကို လေ့လာထားမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အတွက်တစ်နေရာစာရှိနေမှာ ကျိန်းသေပါပဲ။
Sound Engineer တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ကတော့ Game တစ်ခုရဲ့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်အားလုံးကိုဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်လို တီးလုံးလေးတွေ ထည့်မယ်။ Game နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုတီးလုံးတွေထည့်မယ်၊ ဂိမ်းဆော့နေတုန်းနောက်ခံတီးလုံးလေးတွေ၊ ဇာတ်ကောင်စကားပြောတာတွေ စတဲ့ အသံပေါင်းစုံကို ဂိမ်းတစ်ခုနဲ့ လိုက်ဖက်ညီအောင် ဘယ်လို Creation တွေလုပ်မယ်၊ ဘယ်လို effect တွေသုံးမယ် စတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ Game တစ်ခုရဲ့ အသံကလည်း ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဂိမ်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာက sound engineer တွေရဲ့အပိုင်းကလည်း အရေးပါလှပါတယ်။ အသံပိုင်းဆိုင်ရာမှာ နည်းပညာအသိရှိထားပြီး Creation ကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ Sound Engineer အဖြစ်နဲ့ Game Industry ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Game Development အတွက်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ role တွေက ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်ပေမဲ့ Game Development လောက အတွက် အဓိက လိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Game Development ပိုင်းကိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဦးဆုံး Game တစ်ခုရဲ့ Game Development ပိုင်းမှာ ဘာတွေပါလဲ? Game ကို လူတွေ ဘာကြောင့် ဆော့ရတာလဲ? အခြေခံ concepts တွေကို အရင်ဆုံးလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခြေခံ concepts တွေကို နားလည်ပြီးရင်တော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းအတွက်ကို skill training လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဂိမ်း Development ပိုင်းပညာရပ်တစ်ချို့အတွက် သင်တန်းတွေမှာ သင်ကြားနိုင်သလို ခုလို ခေတ်ကြီးမှာ Google, Youtube စတဲ့ resources များစွာတွေထဲမှာလည်း Self-study လေ့လာဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ Skill တည်ဆောက်နိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ Game studio (သို့) Game Development စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ပြီး တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Game Studio ထဲမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ skill အလိုက် Internship, Junior level ကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ group ဖွဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်အနေနဲ့ game development ပြိုင်ပွဲတွေမှာ တက်ရောက်ပြီး ကိုယ်နဲ့ ဝါသနာတူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ရှာဖွေပြီး ကိုယ်ပိုင် Game Development အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ဒီလိုဆိုတော့ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ် လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နိုင်ပြီလေ..။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် Game Development လောက က လိုအပ်ချက်များစွာရှိတဲ့အထဲက အလုပ်အကိုင်ပေးနိုင်မှုတစ်ခုကလည်း အပါအဝင်လို့ဆိုရမလား?? ခုလက်ရှိမှာတော့ Senior Level ရောက်ရှိနေတဲ့ Game Development တွေ အနေနဲ့ ပျှမ်းမျှလစာ (၃)သိန်း (၄)သိန်းလောက်နဲ့ ရပ်တည်နေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ Game Development Industry မှာရှိတဲ့ ပညာရှင်တစ်ချို့အနေနဲ့ ဝါသနာတူလူငယ်တွေအတွက် စားဝတ်နေရေးမေ့ထားလို့ရလောက်တဲ့အနေအထားအထိ လစာပေးပြီး ဆွဲခေါ်တာမျိုးတွေလည်း တွေ့ရသလို လစာကွာခြားမှုက ကိုယ်လုပ်ကိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တောင့်တင်းမှု အပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ်။
လူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ စိတ်အပန်းဖြေမှုနည်းလမ်းထဲမှာ ဂိမ်းဆော့ခြင်းလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Game ဆော့ခြင်းက အလွန်အကျွံမဟုတ်ဘူးဆိုရင် စိတ်အပန်းဖြေခြင်းသာမက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ Problem solving skill တွေကိုလည်းပိုမိုတိုးတက်စေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ် ( အလွန်အကျွံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော် မှတ်မိအောင် နှစ်ခါရေးတာ)… ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း လူတွေက ဂိမ်းကို စိတ်ဝင်စားလာသလို ဂိမ်းရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကလည်းကြီးမားတာကြောင့် တစ်ချို့သောသူတွေအတွက် ဆေးစွဲသလိုတောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ ခုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ ဂိမ်းတွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပိုမိုဆော့ကောင်းလာပြီး လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အများဆုံးဖမ်းစားနိုင်တဲ့အတွက် ဂိမ်းတည်ထောင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက အပြိုင်အဆိုင်လုပ်လာကြပါတယ်။ Game ဆိုတာကလည်း အောင်မြင်ခဲ့ရင် ပြန်ရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်က ရင်းနှီးမှုထက် အဆများစွာများပြားလာတဲ့အတွက် Game Industry ထဲကို ရင်းနှီးတဲ့သူတွေက ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Game Development ပိုင်းရဲ့အနာဂတ်က ရွှေရောင်တစ်ဝင်းဝင်းနဲ့လှပေနဦးမှာပဲဖြဖစ်ပါတယ်။